माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै –थापासहित एमालेमा गएका २३ लाई कारवाही ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै –थापासहित एमालेमा गएका २३ लाई कारवाही !
माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै –थापासहित एमालेमा गएका २३ लाई कारवाही !
चैत १ गते, २०७७ - १०:३७
काठमाडौं । आजबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक बस्न लागिरहेको छ ।
अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट छुटिट्एका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्य केन्द्रको पहिलोपटक केन्द्रिय समिति बस्न लागेको हो ।
चैत १ गते, २०७७ - १०:३७ मा प्रकाशित